Waaheen Media Group » Wasiirka ugu waxqabadka badan kalsoonida shacabka haystaa wuxuu noqday Wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi- Qore Mire Maxamed Xuseen‏
Browse:Home Articles Wasiirka ugu waxqabadka badan kalsoonida shacabka haystaa wuxuu noqday Wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi- Qore Mire Maxamed Xuseen‏	Wasiirka ugu waxqabadka badan kalsoonida shacabka haystaa wuxuu noqday Wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi- Qore Mire Maxamed Xuseen‏
on November 1, 2014 |
Comments Off	Xisbiga KULMIYE markuu talada dalka qabtay waxaa laga joogaa 4 sanno iyo dhowr bilood. Kadib markuu cod aqlabiyad ah oo aad u balaadhan kaga guulaystay xisbigii talada dalka hayey ee UDUB. Markii uu talada la wareegay madaxweynaha Somaliland oo noqday madaxweynihii 4aad ee taariikhda dalka soo mara , ayaa waxa uu bilaabay inuu soo dhiso gole wasiira ah , si ay u dardar geliyaan balanqaadyadii madaxweynaha markuu ahaa musharaxa madaxweynaha inuu dalka horumar gaadhsiin doono.
Wuxuu soo dhisay madaxweynuhu golo wasiira ah oo kooban aqoona u leh hawsha loo igmaday. Xilkii cuslaa ee loo igmaday wasiiro dhowr ah baa ka soo baxay ama kasoo dhalaalay . kuwa badan shaqadii buu ka fadhiisiyey markuu saluugay wax-qabadkooda qaarna wuu isku bedelay. Hadaba aynu dib u jaleecno wasiirada madaxweynuhu uu ku qancay waxqabadkooda , kartida iyo hawl kartinimadooda ay la yimaadeen. Waxaa ka mid ah wasiirada shaqadooda loo daayey ee digreetadii ugu horaysay uu madaxweynuhu ku magaacabay jooga wasiiradan hoos ku xusan:
Samsam Cabdi Aadan oo ah Wasiirka waxbarashada iyo Tacliinta sare
Maxamuud Xaashi Cabdi – wasiirka Duulista iyo Hawada
Sacad Cali Shire – wasiirka qorshaynta Qaranka
Sheekh Khaliil – Wasiirka Diinta iyo Aw-qaafta
Faarax Cilmi Geedoole – wasiirka beeraha
Axmed Cali Cadami-Wasiirka Gaashaandiga
Haddaba lixdaa wasiir ee aan kor kusoo xusay waxay ka mid yihiin wasiirada Madaxweynaha Somaliland ku qancay hawshii loo xilsaaray , shacabkuba waxay ka marag u yihiin inay ummadan wax badan u qabteen iyaga iyo wasiirada kale. Hadaba markaan ku darsay dhowr qodob afartan wasiirka ka ugu waxqabadka iyo kalsoonida badan anigoo ku eegay qodobadan hoos ku qoran:
Waxqabadka shaqadiisa iyo wasaarada
kalsoonida madaxweynuhu ku qabo xaga shaqadiisa
Kalsoonida shaqaalihiisu ku qabaan
Kalsoonida shacabka Somaliland
Kalsoonida iyo tageerada uu ka haysto reerkiisa
Muddo dheer markaan baadhay lixdaa wasiirka ka kaalinta kowaad galay anigoo ku miisaamaya qodobadaa shanta ah ee aan kor ku xusay, iyo bulshada ra’yidka iyo dhalinyarada oo aan xog-badan waydiiyey waxaa ii soo baxay inuu yahay wasiirka kaalinta kowaad kaga jira wasiirada Somaliland inuu yahay:
Maxamuud Xaashi Cabdi oo ah Wasiirka Duulista iyo Hawada ee Jamhuuriyada Somaliland.
Maxamuud Xaashi Cabdi oo ah siyaasi ruug cadaa ah, kana mid ahaa dhalinyaradii ururkii SNM ee dalka xoreeyey. Waxaana lagu tiriyaa inuu yahay siyaasiyiin fara ku tiriska ah eel eh kalsooni badan dhinaca reerkiisa iyo bulshada Somaliland ka haysta dhamaantood. Wuxuu soo shaac baxay markii noqday Duqii ama mayorkii ugu horeeyey ee Burco markii dalka la soo galay. Waxaanu noqday maayarkii ugu da’da yaraa ee Somaliland ee loo dhiibay hawl aad u culus iyo magaalo burbursan . laakiin kartida uu muujiyey iyo waxqabadkiisu wuxuu noqday inuu baal dahab ah ka galo tariikhda Somaliland. Wuxuu magaalada Burco ku casuumay shirkii 18 MAY 1991 ee Somaliland xoriyadeedii kula soo noqotay. Wuxuuna ka mid noqday baarlamaankii Somaliland ee ugu horeeyey isagoo ahaa xildhibaan runta sheega oo hadal cadcad.
Markaan taariikhda gaaban ee aan ka aqaano halkaas ku dhaafo, bal aan u soo noqdo shantii qodob ee aan ku soo xulay anigoo qodob qodob u dul istaagaya.
Qodobka koowaad Waxqabadka shaqadiisa iyo wasaarada
Runtii xukuumada Madaxweyne Axmed Siilaanyo inkastoo dalka horumar la taaban karo gaadhsiisay, haddana wasaaraduhu kala waxqbad badan . Wasaarada duulista iyo hawada waxa ay qabatay laguma soo koobi karo qoraalo, laakiin anigoo sarsaraya waxaa ka mid ah:
Madaarka Cigaal ee Caasimada Somaliland, inuu maanta yahay garoon diyaarad kasta ku soo degi karto oo loo sameeyey dhabo r (un-way) 5 kiilo miter (5KM) oo dhow dhow loo sameeyey lagana raystay diyaaradihii Berbera loo duwi jiray iyagoo u soo socda Hargeisa. Waxaa la sameeyey dhismayaal casri ah iyo laamiyo lagu dhex wareeyiyey baarkinada, iyo laami casri ah oo taga madaarka. Dhismaha ugu casrisan ee wasaarada loo sameeyey ee ku yaal madaarka agtiisa. Waxa la bilaabay in markii ugu horaysay xayndaab lagu soo wareejiyo madaarka si loo sugo amniga. Waxa kale oo sameeyey kamerooyin casri ah (cc camera) oo loogu talo galay amniga madaarka si loola socdo dhaqdhaqaaqa madaarka.
Laso qaybaha kale……